APT waxay ku gaareysaa nooca 1.0 baarka horumarka marka la rakibayo xirmooyinka | Laga soo bilaabo Linux
APT waxay ku gaareysaa nooca 1.0 baarka horumarka marka la rakibayo xirmooyinka
Haddii aad isticmaaleysid GNU / Linux, iyo sidoo kale, isticmaalaha Debian GNU / Linux si gaar ah iyo waxyaabaha ka soo jeeda, markaa waa inaad ogaataa waxay tahay APT si fiican. Haddii aadan ahayn, macno malahan, waan kuu sheegayaa.
APT (Qalab Baako Sare leh ama Qalab Baako Sare leh) waa nidaam maarayn xirmo oo ay abuurtay iyo mashruucii Debian, in kastoo loo isticmaali karo qeybinta kale.
Ilaa imaatinka Pacman, waxay iigu fiicneyd aniga Maamulaha xirmada Waan isku dayay, waana la sii daayay 16 sano ka hor, markaa waxaad u tixgelin kartaa halyeey dagaal.
Bishii Abriil 1 ee sannadkan, ayaa la bilaabay version 1.0 ee APT, oo cibaado ugu weyn ay tahay inay midaynayso amarrada:
$ sudo apt-get [xulashooyinka] $ sudo apt-cache [xulashooyinka]
Tan awgeed, binary ayaa loo abuuray si fudud:
Iyada oo leh binary cusub xulashooyinka soo socda ayaa loo isticmaalaa (qaarna sidoo kale waa lala isticmaalaa macquul ah):
liiska: wuxuu la mid yahay liiska dpkg waxaana loo isticmaali karaa calammo - rakibay or - la cusbooneysiin karaa.
search: wuxuu u shaqeeyaa sida baaritaanka apt-cache laakiin wuxuu u xalliyaa natiijada asal ahaan.
show: wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah muuqaalka 'apt-cache show' laakiin wuxuu qariyaa faahfaahinta dadku u badnaan inay daryeelaan (sida xashiishka). Waxaad ku arki kartaa natiijada buuxda adoo adeegsanaya apt-cache show dabcan.
update: wuxuu u shaqeeyaa sida saxda ah ee loo yaqaan 'apt-get' laakiin markan midab buu leeyahay.
rakib, saar: kudar bar horumarka inta dpkg socoto.
casriyayn: wuxuu u shaqeeyaa isla sidii apt-get dist-upgrade - oo-cusub-pkgs.
buuxa-casriyayn- Magac macno badan u leh dib u cusbooneysiinta.
tafatir-ilo: wax ka beddel faylka Ilo.list adoo adeegsanaya $ EDITOR.
Waa kuwan tusaalaha sida baarka horumarka u egyahay:
Waad awood u yeelan kartaa / joojin kartaa horumarka rakibidda amarka:
source: Maqaalka Michael Vogt
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » APT waxay ku gaareysaa nooca 1.0 baarka horumarka marka la rakibayo xirmooyinka
Aad u xiiso badan in lagu daro apt-get oo leh apt-cache hal amar.
Waxay ahayd waqti.
Hagaag, waxay ku qaadatay kaliya 21 sano si ay u helaan maamule xirmo binary leh bar horumar, xitaa ma Arch Linux in ~ 10 sano jiritaanka distro ay leeyihiin mid ka mid ah nidaamyada xirmooyinka GNU / Linux ugu fiican , maahan in la xuso maareeyaheeda, pacman!
Oh nasiib, sug ... waxay ahayd uun jid kale oo ku xeeran: S
Hagaag, dhibaatadu sax ma ahan taasi, laakiin ugu yaraan talaabada xigta waxay noqoneysaa in la wanaajiyo DPKG si markaa ay u ahaato heerka Pacman.
Arrinta halkan ku taal ayaa ah, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan doontaa qashin-qubka? Waxaan ula jeedaa, nolosha buuxda ee nooc ah inaadan ku sameyn karin isbedelkan si aan macquul ahayn, waxaan qiyaasayaa inay taasi jebin doonto dhammaan API-yada barnaamijyada sida Muon, oo ay tahay inay adeegsadaan amar-ku-helidda iyo sheekada oo dhan ... Goorma ayey gaari doontaa diirrada? Mise waan hadlayaa anigoon ogeyn? xD
Waxaan u maleynayaa in la labanlaabi doono, waxay ku fiicnaan laheyd marka hore
Aan aragno .. xiganaya Wikipedia:
«… Dpkg lafteedu waa qalab heerkiisu hooseeyo; darajo hore oo heer sare ah ayaa loo baahan yahay si xirmooyinka looga keeno meelo fogfog ama loo xalliyo isku dhacyada qalafsan ee ku xirnaanta xirmooyinka. Debian ayaa ku habboon hawshan ... »
Marka waxaan u maleynayaa in illaa iyo inta DPKG aysan is beddelin, aysan macno lahayn haddii APT ay ku darto ama ka saarto xulashooyinka ..
Isla taas. DPKG waa sida Slackware's PKGTOOL, oo ​​ka duwan Slackware oo aan kubad siinaynin gadaal-gadaal, Debian, waxay ku mareen dherer aad u dheer si ay u sameeyaan dhab-celin dhab ah oo hufan oo sida APT ay u wanaajisay, waxaan ku bogaadinayaa kuwa hagaajiyay dib u celinta.
Si kastaba ha noqotee, PKGTOOL iyo DPKG ma la qabsan doonaan PACMAN (waa hagaag, waa wax dhan, oo illaa iyo hadda, waa quruxsan tahay sida APT).
Waxay ila tahay aniga amarka finak inuu sidan u ekaado:
War aad u xiiso badan.
Muddo dheer ayey ku qaadatay inay wax sidaas oo kale ah sameeyaan, sidoo kalena OpenSUSE, Fedora, Arch uma ay qaadin inay baarkaas oo kale sameeyaan, waxay u baahan yihiin oo keliya inay u ahaato sidii loogu dalbaday Yum oo kale. : p
Waan saxay, amarka ugu dambeeya ee shaqeynaya waa in la qoraa:
Mar saddexaad ayaa soo jiidashada:
Waan kala daadanayaa oo.
waxaa lagu cusbooneysiin karaa wheezy debian
Kaliya ku rakibida xirmada dhinac
Waa immisa jeer kuwa APT. Marka adduunka Pacman la ogaado waxaad ogaaneysaa sida ay u xaddidan tahay. Aragtidayda Pacman waa milkiilaha iyo sayidka gnu / linux. Ma haysto cid hadheysa.
Ku jawaab schneider
Qaar ka mid ah zypper, yum ama pacman ayaa la soo guuriyey. Waxaan urayaa udiyaar garowga suurtagalka ah ee nidaamka mustaqbalka-D oo aan ku noolaankarayaa. Dhamaadka maalinta apt wuxuu had iyo jeer la shaqeynayay kor u kaca oo aan la shaqeynin Nidaamka-D, laga yaabee inuu isbeddelkaasi jiro.
Ds23yTube: «Si kastaba ha noqotee, apt wuxuu had iyo jeer la shaqeynayay bilowga mana shaqeynayo Nidaamka-D»
@ Ds23yTube Mr. Ubuntero, waa inaad waxbadan barataa kahor intaadan sameyn hadalada noocaas oo kale ah. APT waa aalad Debian ah, sidaas oo kalena WALIGAA lama isticmaalin bilowga, laakiin waa SysVInit (Nidaamka V).
Kaysar baa leh wixii Kaysar leeyahay.
Ku jawaab Etemenanki
Oh, bar horumarka… taasi waa boodboojin dhab ah oo dhab ah!
Laakiin shaki ayaa iga jira:
- Midabku ma la beddeli karaa?
- Nooca font ee aad isticmaasho? Ma isticmaali karaa maqaarka
- Widgeter-ka ma lagu dari karaa?
- Miyuu si fiican uga shaqeeyaa shaashadda taabashada?
Aan aragno haddii qof cadeyn karo su'aalahan aadka muhiimka u ah ... ¬¬
PS: runti? Barta horumarka miyay tahay muuqaalka cinwaanka? Dareen leh.
warkaas wanaagsan ... bar horumarka waa midka ugu yar ... waxaan ka walwalayaa isbadalka taliska ...: S
Horumar aad u wanaagsan.
Waxaan u arkaa mid aad u xiiso badan oo aad u fiican qabow ...
Si toos ah ugala soo bax dukumiintiyada PDF Firefox adigoon eegin
Kheyraadka barashada sida loola shaqeeyo Inkscape